नेकपाको सचिवालय बैठक सकियो, निकै महत्वपुर्ण मानिएको बैठकमा के निर्णय भयो ? – Ktm Dainik
नेकपाको सचिवालय बैठक सकियो, निकै महत्वपुर्ण मानिएको बैठकमा के निर्णय भयो ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
नेकपाको सचिवालय बैठक सकियो, निकै महत्वपुर्ण मानिएको बैठकमा के निर्णय भयो ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक कुनै निर्णय नगरी सकिएको छ ।
बैठकको शुरुमा केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउनुको उदेश्यबारे कुरा राखेका थिए ।
सरकारले पार्टीसँग कुनै सल्लाह नै नगरी गम्भीर राजनीतिक महत्त्वका अध्योश ल्याएको भन्दै बैठकमा नेताहरुले असन्तुष्टिसहित प्रश्न गरेका थिए ।
बैठकमा अधिका‌ंश सदस्यहरुले दुई अध्यादेशबारे छलफल नभइ किन ल्याएको भनेर प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेपनि जवाफमा ओलीले विभिन्न संबैधानिक नियुक्तिहरु गर्न अप्ठेरो परेकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको जवाफ दिएका थिए ।
अरु सचिवलायका सदस्यहरुले धारणा राख्दै गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भएको सुचना ओलीले दिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार ओलीले जारी भईसकेको विधेयकमाथि तत्काल छलफलको औचित्य नभएको र आफु राष्ट्रपतिकोमा जानुपर्ने भन्दै बैठक सकिएको बताएका थिए ।
नेकपा स्रोतका अनुसार अध्यादेशबारे छलफल हुँदाहुदै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको खबर बालुवाटारमा पुगेको थियो । त्यसपछि नेताहरु बैठक नै समापन नगरी उठेका थिए ।
कतिपय नेकपा नेताहरुले चाहिँ पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड लगायतका नेताहरुलाई तर्साउनका लागि मात्र यो अस्त्र प्रयोग गरेको हुन सक्ने अनुमान पनि लगाइरहेका छन् । भने केहीले कोरोना भाइरसको संक्रमणको बेलामा ‘रअ’ र सीआइए को दबावमा परेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पारित गर्नको लागि यो कदम उठाएको हुनसक्ने आँकलन गरेका छन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमबार, वैशाख ८ २०७७ २१:४१:१०